Isikhumba Suede Factory, abahlinzeki - China Isikhumba Suede Abakhiqizi
Isikhumba Esithengisa Okushisayo se-Black Microfiber Suede se Wheel Steering
Isikhumba seMicrofiber suede sihlanganisa izinzuzo zesikhumba nendwangu, sigumbuqela umqondo wendabuko wokuthi isikhumba siphakeme kunakho konke okusengqondweni yabathengi, sichaze kabusha izindwangu zokwenziwa, silethe izitayela ezintsha zekhwalithi esezingeni eliphakeme, nempilo enobungani bemvelo.
Indwangu esezingeni eliphezulu ye-Suede Lingisa Isikhumba se-Microfiber se-Auto
I-Microfiber suede yakhiwe nge-polyamide, okuyinkulungwane eyodwa kuphela yobubanzi bezinwele. UBensen usebenzisa lesi sakhiwo ukuqinisekisa ukunethezeka nokuthoba kwesuede.
Izinto Zesikhumba seMicrofiber Suede seCar Seat Cover kanye ne-Auto Interior
I-polyester microfiber eyenziwe nguBensen inomuzwa ofana nowesikhumba esiwile, kepha ayisona isikhumba sangempela, kepha isikhumba sokwenziwa se-microfiber.
Isikhumba se-Nonwoven Microfiber Suede Eco Synthetic for Interior Yezimoto
I-microfiber suede eyenziwe nguBensen ayinayo i-DMF esivivinyweni semvelo. Okwemikhiqizo egcwele amanzi, akunabungozi empilweni yomuntu, akukho kungcoliswa kwemvelo.
Isikhumba Sekhwalithi Engcono Kakhulu Sokuhlobisa Kwangaphakathi Kwemoto
Isikhumba seMicrosuede sinezinzuzo eziningi, njengokuthamba okuhle, isitayela esihle, umbala ogcwele, ukumelana okuqinile / ukuhuzuka, ukulondolozwa kalula, njll. Isikhumba seSuede cishe sinezinzuzo zonke zesikhumba nendwangu.
Isikhumba Suede Semoto Esithambile Futhi Esihlala Isikhathi Eside se-Auto Interiors
Isikhumba seMicrofiber suede siwumkhiqizo osezingeni eliphezulu ngokujwayelekile, kepha hhayi ngezizathu ezifanayo nezinye izinhlobo zesikhumba. Futhi yilokho kuthambeka nokuthambekela okubaluleke kakhulu.
Isikhumba se-Hydrolysis Resistant Suede PU Synthetic Microfiber
Ukufakwa esikhundleni se-Alcantara kune-plasticity enhle kakhulu futhi kungenziwa kube: isondo lokushayela: isondo lokushayela likaHuracan lisongwe ngokufakwa kwe-Alcantara ezinhlangothini zombili ukwenza ngcono ukuzwa nokwandisa ukungqubuzana, amaphaneli angaphakathi, izihlalo, ulwelwesi (izikhwama zesikhumba, ulwelwesi lwebhokisi lobucwebe kuzosebenzisa futhi I-Alcantara), amadivayisi we-elekthronikhi, (Ingxenye yekhibhodi yeSurface Pro 4 isebenzisa izinto zokufaka esikhundleni se-Alcantara)
Isikhumba Sezimoto ZaseRed Microfiber Suede Synthetic Goat Suede
Ububanzi beMicrofiber buncane kakhulu, ngakho-ke ukuqina kokugoba kwayo kuncane kakhulu, umuzwa we-fiber uthambile ikakhulukazi.
Ikhwalithi ephezulu kakhulu ye-Auto Suede PU Microfiber Isikhumba
I-Suede yenziwe nge-microfiber futhi inendawo ethambile.
0.7 - 0.8mm Ubukhulu bezimoto zangaphakathi zendwangu Izinto
I-Bensen iyifektri yokukhiqiza i-faux suede eco-friendly enganikeza izinhlobo eziningi zezitayela nemibala ye-faux suede. Uma kuqhathaniswa nesikhumba sangempela, i-faux suede inokumelana okungcono kokuhuzuka, ukumelana namanzi, ukumelana nebala nokutholakala komoya. Ingenye yezinketho ezinhle kakhulu zokuhlobisa imoto yakho.